के हो एमआरआई ? – जीवन शैली
Home /स्वास्थ्य/के हो एमआरआई ?
काठमाडौं : सिटी स्क्यानबाट पत्ता नलागेको वा द्विविधामा परेको रोग पत्ता लगाउन प्रयोग गरिने म्याग्नेटिक रिसोन्सेस इमाजिङ (एमआरआई)को प्रयोग बढ्दो छ । उपत्यकाका ठूला अस्पतालमा एमआरआईको प्रयोग हुने गरेको छ तर सर्वसाधारणका लागि एमआरआई सहजै र सुलभ मूल्यमा पाउन कठिन छ ।
वीर अस्पतालका पूर्वनिर्देशक तथा वरिष्ठ रेडियोलोजिस्ट डा. स्वयमप्रकाश पण्डितले एमआरआईले सबैजसो रोग पत्ता लगाउन सहयोग गर्ने बताउनुभयो । उहाँले कसैको खुट्टा चल्दैन, खुट्टा झमझम गर्छ भने त्यस्तो अवस्थामा पनि एमआरआई प्रयोग गरिने बताउनुभयो । मुख्यतया नसाको रोगमा एमआरआई प्रयोग गर्ने गरिन्छ । थाई, कम्मर तथा अन्य विभिन्न भागको मासुमा ट्युमर पलाएको अवस्थामा समेत एमआरआई प्रयोग गर्न सकिन्छ ।
वीर अस्पतालमा एमआरआई गराउन महँगो शुल्कसँगै पालो कुर्नुपर्ने बाध्यता छ । वीर अस्पतालका निर्देशक डा. केदार सेन्चुरी एमआरआईका लागि एक सातासम्म पालो कुर्नुपर्ने बताउनुहुन्छ । “बिरामीको सङ्ख्या अत्यधिक भएकाले हामीले तत्काल एमआरआई सेवा दिन सकिरहेका छैनौँ’’, निर्देशक डा. सेन्चुरीले थप्नुभयो, “अत्यधिक बिरामीको चापका कारण बिरामीले केही दिन पालो कुर्नैपर्छ । ”
यस्तै त्रिवि शिक्षण अस्पतालमा समेत तीनदेखि पाँच दिनसम्म पालो कुर्नुपर्ने हुन्छ । त्यहाँ पनि बिरामीको चाप भएकाले एमआरआईमा पालो पाउन मुस्किल छ । अस्पतालका निर्देशक डा. प्रेम खड्गाले गत वर्ष मात्र जापान सरकारले एमआरआई मेसिन दिएकाले उपचारमा सहज भइरहेको जानकारी दिनुभयो । “दैनिक १५ देखि २० जनासम्मलाई हामीले सेवा दिइरहेका छौँ”, निर्देशक खड्गाले भन्नुभयो, “अस्पतालमा एमआरआई गर्दा आठ देखि १६ हजार रुपियाँसम्म लिने गरेका छौँ । ”
यस्तै पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा समेत एमआरआई सेवा उपलब्ध छ । पाटनमा एमआरआई गराउँदा आठ देखि २५ हजार रुपियाँसम्म लाग्ने गर्छ । अस्पतालका रेडियोलोजिस्ट विभाग प्रमुख डा. डीबी कार्कीले पाटनमा दैनिक सातदेखि १२ जनासम्मको एमआरआई हुने गरेको जानकारी दिनुभयो ।
धुलिखेल अस्पतालमा भने एमआरआई सेवा अन्य सरकारी अस्पतालका तुलनामा कम शुल्कमा हुने गरेको छ । धुलिखेल अस्पतालका निर्देशक डा. रमेश मकाजूले धुलिखेल अस्पतालमा चारदेखि आठ हजार रुपियाँमा एमआरआई सेवा लिन सकिने जानकारी दिनुभयो । दैनिक सातदेखि १० जनासम्मले एमआरआई सेवा लिने गरेको भन्दै उहाँले अन्य अस्पतालको तुलनामा कम मूल्यमा सेवा दिइरहेको बताउनुभयो ।
वरिष्ठ रेडियोलोजिस्ट डा. स्वयमप्रकाश पण्डितका अनुसार एक्सरे र सिटी स्क्यानमा जस्तो रेडिएसन एमआरआईमा हँुदैन । एमआरआई चुम्बकीय शक्ति प्रयोग गरेर बनाइएको हुन्छ । यसको आफ्नै किसिमको विशेषता हुन्छ । एमआरआईको समयमा म्याग्नेटिक वस्तु छ भने भित्र लानै हुँदैन । टाउकोमा कुनै क्लिप लगाएको छ भने म्याग्नेटले तान्दिन सक्छ ।
अस्पतालका निर्देशक डा. केदार सेन्चुरीले नेपालमा सामान नपाइएकाले बिग्रिएको एमआरआई बनाउन ढिलाइ भएको जानकारी दिनुभयो । भारतबाट प्राविधिक टोली आएर एमआरआई बनाएपछि सुचारु भएको जानकारी उहाँले दिनुभयो ।
उपत्यका बाहिरका सरकारी अस्पतालहरूमा एमआरआई सेवा सञ्चालनमा छैनन् । केन्द्रीय सरकारअन्तर्गत भरतपुर अस्पतालका निवर्तमान निर्देशक डा. विश्वबन्धु बगालेले भरतपुर अस्पतालमा हालसम्म एमआरआई सेवा नरहेको जानकारी दिनुभयो । उहाँले कुनै बिरामीलाई एमआरआई सेवा आवश्यक भएमा निजी क्षेत्रमा रिफर गर्ने गरिएको जानकारी दिनुभयो । डा. बगालेका अनुसार भरतपुर अस्पताल केन्द्रीय अस्पताल भइसकेपछि एमआरआई सेवा सुचारु हुनुपर्ने बताउनुभयो ।
यस्तै उपत्यकाबाहिरको सबैभन्दा ठूलो विराटनगरस्थित कोसी अस्पतालमा समेत एमआरआई सेवा छैन । ओपीडीमा मात्र दैनिक एक हजारभन्दा बढी बिरामी आउने कोसी अस्पताल पछिल्लो समय केन्द्रीय अस्पतालका रूपमा रहेको छ । अस्पतालका निर्देशक डा. रोशन पोखरेलले हालसम्म एमआरआई सेवा नरहेको जानकारी दिनुभयो । उहाँले बिरामीको चापअनुसार अस्पतालमा एमआरआई सेवा अत्यावश्यक रहेको बताउनुभयो ।
निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित संस्थाले पनि विभिन्न अफर ल्याई एमआरआई सेवा सहज बनाउने गरेका छन् । नक्सालस्थित एमआरआई सेन्टरमा सात हजार रुपियाँमा एमआरआई सेवा दिने गरेको जनाइएको छ । सेन्टरका वरिष्ठ रेडियोलोजिस्ट डा. निर्मल न्यौपानेले सेन्टरले सात हजार रुपियाँमा तत्कालै एमआरआई सेवा दिने गरेको बताउनुभयो ।
बिरामीलाई सुविधा दिन सेन्टरले हालै मात्र एमआरआईमा नयाँ योजना ल्याएको ल्याएको हो । डा. न्यौपानेले सेन्टरले २०औँ वर्ष प्रवेश गरेको अवसरमा सोमबारदेखि ३३ देखि ५० प्रतिशतसम्म छुट दिएर सात हजार रुपियाँमा सेवा दिने गरेको दाबी गर्नुभयो । उहाँले डाक्टरलाई कमिसन नदिने हो भने अझै सस्तोमा सेवा दिन सकिने पनि बताउनुभयो । गोरखापत्र